Fa maninona no mihena ny isan'ny fizarana GNU / Linux? | Avy amin'ny Linux
Lahatsoratra mahaliana navoakan'izy ireo tao datamation.com amin'ny antony izay Fizarana GNU / Linux izy ireo dia nihena ny habetsany, nampiasa ho antontan-kevitra ny antontan'isa natolotry ny Distrowatch.
1 Fa maninona no nihena ny isan'ny fizarana GNU / Linux?
2 Ny hevitro manokana
Fa maninona no nihena ny isan'ny fizarana GNU / Linux?
Andao hojerentsika izay lazain'izy ireo amintsika ao amin'ilay lahatsoratra nampifandraisiko teo aloha (amin'ny teny Anglisy), amin'ity fandikana antonony ity amin'ny teny Espaniola:
Ny isa Fizarana Linux eo amin'ny fihenan'ny. Ao amin'ny 2011, ny tahiry de Fizarana Linux Fananana distrowatch nahatratra farafaharatsiny 323. Amin'izao fotoana izao, fahotana embargovoatanisa irery 285. na izany aza, tena maninona no hantsana Izay dia manatanteraka ary ohatrinona raharaha, tsy mazava.
Distros Nanana izany foana izy ireo avia ary mandehana. Raha ny marina, Distrowatch lisitra 791 fizarana efa nisy izany hatramin'ny nananganana azy ao amin'ny 2001, na dia latsaky ny efapolo isan-jato nunca ha fanjakana mandroso active indray mandeha. ireo fanisana mety tsy feno, nanomboka fizarana sasany angamba tsy dia voasoratra anarana ao amin'ny Distrowatch.
Fa mandra-pahatongan'ny eo amin'ny 2011, Ny isan'ny fizarana mavitrika mitombo lentamente ny tsirairay taona, fa ihany vitsy. Mifanohitra, ny telo farany taona maro no niseho iray monja fihenan'ny 12% - fihenam-bidy avo loatra afaka mampindramin-tena ho fifanandrifian-javatra. De maninona mitranga ve?
Ampahany amin'ny anton'ity fihenana ity, es noho ny Linux isak'izao mihetsika izao es latsaka fialamboly ary iray hafa bebe kokoa paikadin'ny orinasa. rehefa MPANKAFY afaka mbetika, ireo orinasa raharaham-barotra manahy bebe kokoa izy ireo miaraka amin'ny valiny - manokana amin'ny fihenan'ny fotoana hivarotana ary mampihena ny vidiny fampandrosoana. Miaraka amin'ireo ahiahy ireo, ireo orinasa tsy dia mino an'izany mahazo traikefa Ho an'ny fitiavana an'i fanandramana, ary azo inoana kokoa fa fototra ny fivoarany ao amin'ny olana misy.
Angamba koa, mpanohana Linux mihantitra izy ireo, y, toy ireo orinasa, Tienen kely kokoa ny fotoana ho an'ny fialambolinao ary mihoatra olana misy valiny eo noho eo. na izany aza, statistika amin'ny vondrona isan-karazany toy izany ataovy ity mety zavatra tsy azo atao ny manamarina.
iray hafa antony hihena mety ho ilay ivon-toerana fanavaozana ha niova tamin'ny farany taona avy ny fizarana ho an'ny ny birao. Na dia ny ankamaroan'ny fizarana no un biraonao banga, ny ankamaroan'ny ny tena zavadehibe manolotra farafahakeliny ampolony deskeny, maro amin'ireo mampiroborobo samy hafa Fahazarana miasa en ireo mpampiasa.
Afa-tsy ny sary an-tsary sy ireo lohahevitra, Amin'ny ankapobeny dia mora kokoa amin'ireo andro fantaro indray mipy maso de desk ianao fampiasana ary cual fizarana dia mampiasa. Noho ny fironana saika manerantany mankany fametrahana fonosana amin'ny fomba iray Tabilao, tsy afaka akory ianao fantaro mora rafitra inona ny fitantanana fonosana dia mampiasa.
Ny mifanohitra amin'izany dia, Na izany aza ny teknolojia ampiasainao dia de Debian. Farafaharatsiny ampahany amin'ny ny fihenan'ny fizarana afaka to be fa ny haitao an'ny Debian mahaliana, ary efa misy Sampanteny Debian ho an'ny fampiasana rehetra azon'ireo mpampiasa hanan'anaka mora foana. Tohana io hevitra io amin'ny zava-misy fa, raha ny isa de fizarana Nihena izy io, ny isa miorina amin'ny Debian na ny azy malaza indrindra derivative, Ubuntu, efa nandalo avy 63% ny isa totalin'ny fizarana ao amin'ny 2011 hatramin'ny 70%.
Ny isa nalaina avy amin'ny Debian nihena tao fotoana izao, miaraka amin'ny fahaverezan'ny efatra fizarana miorina amin'ny Debian, y fito amin'ny Ubuntu. Na izany aza, ireto tarehimarika dia mitovy amin'ny 1,5% ny fatiantoka, iray fahavalo an'ny ny fihenan'ny ankapobeny amin'ny ny distros. Ity razambe ity es kely dia kely izany afaka misolo tena fivontosana antontan'isa mihoatra ny fironana. Farafaharatsiny, ny debian-Sampanteny manjavona izy ireo miadana noho fizarana hafa.
Na iza na iza ny antony mahatonga ny fihenan'ny ny distros, Toa sahala amin'ny sisintany manomboka amin'ny akaiky. Mety hiteny ny sasany mihena izany tsy dia maninona. Raha ny marina, 285 fizarana dia tarehimarika iray izay na ny mpampiasa aza mazoto kokoa aza miandry manandrana amin'ny fiainany raha tsy izay tsy natokan'izy ireo ny ain'izy ireo noho ny zavatra iray bebe kokoa.
Mety hiteny ny sasany koa izany Maro amin'ireo fizarana ny kely dia kely y tena manokana izany olona vitsy dia hahatsapa ny very. fahasambarana fahaverezana afaka na dia manararaotra, nanomboka ny isan'ny fizarana midika bebe kokoa mandray anjara amin'ny laFantatro fa velona izy ireo.
Emety ho hitany fa mora kokoa ny mpandraharaha ho an'ny Linux raha manana izy ireo isa kely kokoa amin'ny fizarana. na izany aza, na eo aza ny fanjavonan'ny fizarana sasany nampanantena como el Fuduntu, vitsy amin'ny ireo izay manana tsy hita azo dinihina zava-dehibe. Como Las distros zaza tsy ampy taona manana nanjavona tato ho ato telo taona, ny folo voalohany anisan'ny be mpijery indrindra ao amin'ny DistroWatch niova izy ireo kely afa-tsy for ambony na midina toerana iray na roa.
Na izany aza, na izany aza eny indrindra ny fatiantoka han tsy ampy taona, ny fironana dia mampiahiahy. Mpiaro Linux Nanana izany foana izy ireo nankasitraka ny fahasamihafana, ary ny fahaverezan'ny na dia kely aza samihafa parece resaka ahiahy, na dia dia mahasoa ao lafiny sasany. Raha tsy misy hafa, ny fironana manolotra izany Linux dia miala amin'ny ny fakany, ary angamba isaky ny misy izany afa-tsy ireo adventants.
Tsy azo antoka ny fironana. Na izany aza, mendrika ny hijerena azy fotsiny, sao sanatria.
Amin'ny teboka sasany dia mizara ny masonkarenan'ny Bruce byfield ato amin'ity lahatsoratra ity. Heveriko fa ny Linux ho an'ny maro dia nanomboka ho fialamboly, fialamboly, zavatra iray mendrika ny andramana fotsiny ho an'ny fahafinaretana, ary ilay tsikelikely dia nanjary zavatra matotra kokoa. Rehefa nianatra zavatra aho, dia nahatsikaritra fa lasa mankaleo indraindray ny fampiasana GNU / Linux. Efa nolazaiko io, indraindray mahatonga ahy tsy hilamina loatra izany.
Orinasa maro no nahita ny fampiasana GNU / Linux (sy Open Source amin'ny ankapobeny) ho fitaovana tsara ho an'ny maodelim-barotra tsara ary nifantoka tamin'ny fiaraha-miasa na fametrahana vola hanatsarana izany. Canonical, izay nanomboka tamin'ny famoahana fizarana ho an'ny birao, dia nahatsapa fa tsy mahasoa azy irery izany ary namorona (na manandrana mamorona) ekosistema iray manontolo izay mandeha amin'ny telefaona sy ny PC, mankany amin'ny rahona, satria izy io marina eo Any amin'ny farany, izay misy lanjany ny vokatrao, amin'ny serivisy.
Manohana ny fahasamihafana sy ny safidy aho, fa raha izaho manokana dia 100 ny fizarana hafa mety ho faty. Amin'ny farany, misy vitsivitsy ihany izay tena mitondra fanavaozana, na ny forongony ary ireo no tsy maintsy maharitra mandrakizay. Toy izany koa no mitranga amin'ny tontolon'ny birao, 20 hafa no mety hipoitra, izay amin'ny farany ampiasaina, hitazomana sy havaozina, ireo izay teo amin'ny lava indrindra, azo antoka indrindra.
Na izany na tsy izany, na mihena ny fizarana dia tsy tokony hanahy isika satria eo ny GNU / Linux. Afaka mivoatra izy io, afaka manatsara (na miharatsy), saingy hisy foana izy io ho solony. Ary raha tsy Linux (toa an'i Kernel) dia misy zavatra hafa hiseho na ho ela na ho haingana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » hafa » Fa maninona no mihena ny isan'ny fizarana GNU / Linux?
Lahatsoratra mahaliana, mister Elav. (tanana kely)
Mikasika ny tsy fisian'ireo distros voasoratra anaty famantaranandro dia tena marina izy io, toy ny marina ihany koa eo amin'ity lafiny amin'ny dobo any Mexico ity izay misy distros toa an'i ALDOS sy Aztli izay farany teo. Tsy lazaina intsony fa misy ny sasany izay mbola tsy fantatra anarana na ampiasaina manokana.
Marina izany .. Heveriko fa ny isan'ny fizarana tsy miankina misy, saika mahatratra ireo miseho ao amin'ny Distrowatch 😀
Honoris Camacho dia hoy izy:
Heveriko fa ny zava-dehibe dia ny fanamafisana ireo efa manana havanana. Ary mampihatra fivoarana sy fikarohana vaovao momba izay efa misy.
Valiny ho an'i Honoris Camacho
Heveriko fa mitovy ihany, na izany aza, raha misy olona te handefa x-distro manokana ary mahalala ny fomba anaovany izany dia manan-jo hanao izany izy ireo, saingy amin'ny ankapobeny ireo tetikasa ireo dia amin'ny limbo, na eo amin'ny lafiny fotoana na enti-miasa.
Hitako fa talenta marobe no very maina, angamba raha ny ezaka rehetra natao tamin'ny famoronana, tsy fantatro, distro am-polony mifototra amin'ny Ubuntu, Fedora, Debian, Arch, sns., No nanao izany tamin'ny fanohanana ny tetikasa lehibe ... fa mazava ho azy, utopia izy io. Fa mahafinaritra ny manonofy ...
Lohahevitra tena tsara Elav.
eersy dia hoy izy:
Tsy maintsy lazaiko fa manenina ny zavatra mitranga. Mampalahelo tokoa fa maro ny olona misintona ny tontolo iainany.
Io no zavatra tsara indrindra tsara indrindra tsy misy fampifangaroana, ny tsirairay dia olona iray, fa ao anatin'ny fiarahamonina.
Valio i eersy
fanadiovana dia hoy izy:
Ara-dalàna izany, maro ny distro tsy fahita firy no andrana ary nijanona tamin'izany izy ireo, ary ilay iray izay sarotra kokoa ny manamboatra distro anao manokana hatramin'ny fahaverezan'ny remastersys (na dia mbola manana rafitra miverina aza isika nefa tsy dia kanto loatra).
Mamaly ny fanadiovana
Ara-dalàna izany, raha ny tena izy ny isan'ny fizarana dia tsy maninona, fa ny fidiran'izy ireo, ny sary namboarina niaraka tamin'ny ManjaroISO ohatra dia tsy fitsinjarana, safidin'ny fanaingoana Manjaro io. Etsy ankilany, mbola maro ny mampiasa ny tahiry hafa.
Ubuntu Mint sy debian dia mandray ny 50% n'ny mpampiasa amin'ny tsiron'izy rehetra
Arch sy derivatives toa Antergos sy Manjaro mihoatra ny 25% miaraka amin'ny fitomboana be (fianarana ity)
Ny ambiny miaraka dia mitana ny 25%, izay eo am-pandinihina ihany koa noho ny tombony very an'ny Fedora sy SUSE miaraka amin'ny tombony azon'izy ireo amin'ny maha-orinasa mahasoa azy ireo napetraka ao amin'ny tontolon'ny orinasa izay tsy nahavita na te-hahatratra ny SOHO ampahibemaso an'ny GNU / Linux , Gentoo na Sabayon dia resin'i Arch na Manajro na Antergos ho filoham-pirenena mandroso
Izany no manome ny hozatry ny GNU / Linux, tsy maninona izany fa misy distro an-jatony, fa roa (Ubuntu (miorina amin'ny debian) miampy Mint na Arch - Manjaro sy Antergos) izay manapaka ny kaody, ary ny tsirairay avy dia ampifanaraho araka izay itiavanao azy raha tsy izany distro izany dia distro vaovao be.
Raha ny Arch (Antergos sy Manjaro tafiditra) dia efa tena KISS raha mampiasa Manjaro amin'ny heviny fa mety amin'ny zaza vao teraka izy io, fa amin'ny herinao rehetra, ary saika ataonao miaraka amin'ity fototra tsara ity ianao, ianao izany fantaro, ary izany no antony, AUR (izay mila PPA be dia be), famotsoran-keloka (horonana hamerina hametraka isaky ny 6 volana) ary mahatsiaro ho somary mihena kokoa na dia tsy hitan'ny fitsapana aza izany noho ny zavatra mitombo.
Inona no tianao holazaina fa tsy misy afa-tsy ny fisian'ny Ubuntu sy ny Arch ihany?
Raha ara-bakiteny izany dia diso ianao, satria ny tena zava-dehibe dia ny fisian'ny Fedora sy OpenSUSE, izy ireo no mandray anjara betsaka amin'ny ekosistra GNU / Linux.
Ny tena marina dia tsy dia inoako loatra fa ny Arch sy ny fianakaviana dia be mpampiasa kokoa noho ny Fedora, amin'ny faritra inona? Araka ny statistika inona?
Ace dia hoy izy:
Slackware no distro nanombohana ny zava-drehetra.
(ary avy aiza no niavian'ny openSUSE)
ary Arch dia naneho tamin'ny vondrom-piarahamonina Linux ny herin'ny maodely Rolling Release 😉
Mamaly an'i Ace
ary Ubuntu .. tsara hatrany am-piandohana no tsara indrindra ..
ankehitriny izy io dia tsy miasa afa-tsy amin'ireo vao manomboka amin'ny tontolon'ny linux ..
ary mba hahafantaran'ny linux .. oo
Raha ny hevitro, ny fanazavana tsara indrindra momba an'io trangan-javatra io dia mety nomen'i Charles Darwin: io dia vokatry ny fisafidianana voajanahary, izay misy ny mahery indrindra na ny tsara indrindra namboarina ...
venturi dia hoy izy:
Azafady, sampan'i Debian iza no ampiasainao? Eo amin'ny Sid aho ary tsy mivoaka akory fa mampiasa Debian xD Miala tsiny amin'ny offtopic, fa tsy haiko ny manontany anao amin'ny mangingina!
Valiny tamin'i Venturi
Mampiasa Debian Wheezy amin'ny KDE aho. Raha te hampiseho aminao izay rehetra tadiavinao izy dia tsy maintsy manitsy ny soatoavin'ny general.useragent.override amin'ny: config. Raha manana fisalasalana amin'ny fomba fanaovana izany ianao dia manaova fikarohana ao amin'ilay tranonkala fa misy lahatsoratra roa izay hazavain'izy ireo mazava tsara.
Nah, tsy maninona izany, te hahafanta-javatra aho, mieritreritra aho fa raha mandray Debian marin-toerana aho dia eny apetrako amin'ny xD no ampiasaiko koa ny KDE, saingy tsy misy ifandraisany amin'izany, eto no manisa ny info an'ny browser sy ny fizarana hehe. Misaotra ny valiny ihany!
Tsy dia ratsy loatra izany, amiko dia mbola betsaka ny fizarana ary azo antoka fa tsy ho zero mihitsy io isa io. Raha ny marina, maro amin'ireo fizarana ireo no tsy manao afa-tsy ny manova ny endrika ivelany fotsiny ary miantehitra amin'ny tahiry hafa.
Tsara ny mampifantoka ny ezaka amin'ny zavatra malemy GNU / Linux ary malemy ny rindrambaiko maimaimpoana, toy ny automatisation an'ny birao fa na dia tsara aza ny libreoffice dia tsy mifaninana amin'ny MSO, nanatsara ny fitomboan'ny lalao ary manatsara hatrany ireo mpamily maimaimpoana. Ny ezaka ifantohana izay tsy ampy, be loatra ny diso ary 50 eo ho eo no azo raisina ho safidy matotra, farafaharatsiny.
Misaotra an'i Elav tamin'ity lahatsoratra ity, izay tena niteraka resabe.
Raha ny hevitro, heveriko fa tena tsara ny fizarana Linux an-jatony, an'arivony. Eny, izay ahitan'ny hafa ny sombintsombiny, mahita fahasamihafana aho. Ary tsy misy tsara kokoa ho an'ny Philosophy of Free Software miaraka amin'ny toerany 4, fa misy fahasamihafana hevitra, rafitra. Misy mino ve fa tsara fa vitsy ny hevitra? Iza no afaka mitsara mba hamaritra izay hevitra na tetikasa tokony hesorina? Fahefana inona? Mampatahotra ahy ny hevitra tokana eritreritra tokana. Tiako ny karazana varotra an'arivony satria ity dia lavitra antsika amin'ny hevitra tokana manjaka amin'ny hafa.
Etsy ankilany, mino aho fa ny antony mahatonga ny isan'ny distros Linux ambany dia tsy ho fantatra raha tsy misy fandalinana lehibe izay handany vola be sy vola aman-karena maha-olona izay tsy haiko raha manome anjara na inona na inona izy ireo. Azontsika atao ny miady hevitra amin'ny hypothèse, fa tsy ho azontsika antoka ny hevitro.
Ny zavatra izay heveriko fa tena misy, dia ireo olona mampiasa Linux, arakaraka ny maha-tanora azy no lava kokoa. Avy eo ny "rafitra", ny fomba fiainana eto amin'izao tontolo izao ankehitriny, haingana, manokana, mitaky fotoana lava. Misy ihany koa ny adidy sy andraikitra vaovao izay maharitra fotoana tsy hanokanana ny Linux. Saingy tsy tokony ho olana izany, mipoitra ny taranaka vaovao ary ny tranainy indrindra amin'ny Linux dia tsy maintsy manomana sy mampiorina ao anatin'izy ireo ny fanahy mamorona, liana ary mitsikera, ka izy ireo no mitarika.
Heveriko fa tsy misy tokony hatahorana momba an'io, hoy ny mpiara-miasa iray, ny zava-dehibe dia ny fanamafisana ireo fizarana matotra ary manohy manohana ny rafitra fiasan'ny GNU / Linux izay nanome fifaliana be dia be anay ary mbola hanome hatrany. antsika. Raha ny marina dia io no làlana, ankehitriny ary ho avy izay tokony ho lozisialy, GNU / Linux.
Ary raha 10 sisa no sisa, dia tsara kokoa.
Ho an'ny mpihaino tsara, teny vitsivitsy dia ampy.
Valio amin'i Josė Miguel
Andao ho jerena, hoy ny jamba, na manao ahoana ny voanjo! (:
Andao hamindra ity merecumbé (toe-javatra) ity amin'ny faritra hafa, ohatra amin'ny tontolon'ny fitsaboana dia fantatra fa ny fanatanjahan-tena dia tsara amin'ny fahasalamana, ireo izay manao fanatanjahan-tena ary tsy midika akory izany hoe atleta matihanina izy ireo mahalala fa tena mahasoa azy ireo izany. fahasalamana, raha ireo olona ireo ihany no mampita ny zanany, ny fianakaviany, ny namany ary manao izany traikefa amin'ny fampiharana sy mahatsapa fa tsara ho azy ireo izany olona izany dia hahatsapa ho tsara amin'ny fanaovana faribolana concentric lehibe kokoa mampita izany fahalalana izany.
Misy zavatra mitovy amin'izany mitranga amin'ny rindrambaiko maimaimpoana ary indrindra ny tontolon'ny GNU / Linux, raha isika izay mahalala no mampita an'io fahalalana io momba ny tombony lehibe amin'ny fahalalana linux sy ny fikirakirana na ny fahafantarana ny rindrambaiko maimaim-poana ary indrindra ny fampiharana azy amin'ny hafa, dia ho tonga evanjelisitra tsy nahy isika ary azoko antoka 101% fa hitombo ny fampiasana linux.
Ilaina ny mahatakatra sy mahatakatra fa ny ampahany amin'ny tenantsika rehetra, tsy misy dikany ny miteny hoe "fantatro linux ary mampalahelo ahy ny tsy fampiasan'ny olona na mampihena ny fampiasana azy", tsy mpampianatra aho na inona na inona fa rehefa afaka ary iza no hiampitako Amin'ny fomba nametrahako ny bug momba ny fampiasana linux, ary ny marina dia gaga aho fa liana amin'ny fianarana izy ireo ary indrindra amin'ny fampiasana azy, izay no zava-dehibe indrindra, satria izany no fanaon'ny ankamaroan'ny nianatra izahay, nisy nametraka ilay bibikely tato aminay, tiako ny antsasany na feno, manohy manadihady amin'ny fanamorana ny Internet izahay ary mahatsapa fa tsy nahy fa manana ary manohy mianatra momba an'ity tontolo mahafinaritra ity isika. (:
Diso daholo izany rehetra izany (ankoatry ny andalana faharoa napetrakao amin'ny shoehorn) hatrizay, ny lahatsoratra dia miresaka momba ny isan'ny fizarana miaraka amina fampandrosoana mavitrika fa tsy ny mpampiasa, ka amin'ny tenany manokana dia manomboka amin'ny foto-kevitra diso.
Na tsy miraharaha an'io antsipiriany io aza dia tsy ampy ny milaza fotsiny amin'ny hafa hoe "ampiasao Linux / Distro X" ary ankehitriny, ianao koa dia mila miteraka fahalianana ampy ho azy ireo hanala baraka hanandrana fizarana iray, izay tena sarotra tokoa raha tsy fantatrao izay ampiasao matetika ny solo-sain'izy ireo sy ny programa ilainao, na raha misy ny solony hafa (ary vao mainka mihasarotra izany raha toa ianao ka mila miatrika ireo mpampiasa Windows na MacOS izay tsy liana amin'ny fahalianana amin'ny fomba hafa). Izany dia mitaky fotoana be, faharetana ary fikarohana be dia be, zavatra vitsivitsy izay afaka manome anao ny rendrarendra atao (raha tsy havana na zazavavy tianao halaina am-pandriana, amin'ireny tranga ireny dia azonao atao ny manome concession).
Lahatsoratra tena tsara. Raha mbola tsy manjavona i Debian (ho hitantsika izay mitranga amin'ny DEVUAN), ho ahy dia avelao hiseho daholo ny hafa rehetra. 🙂
Mialà heloka, fa fanboy fadiranovana fotsiny ianao, sa tsy izany?
@nagual_oax dia hoy izy:
Heveriko fa samy Debian sy Red Hat no mbola isan'ny tena hita maso, toy ny Slackware, na dia nidina aza ny lazan'izy ireo ...
Red Hat izay niavian'i Mandrake, SuSE, Alika Yellow (niavian'ny YUM), Mandriva ...
Debian izay niavian'ny Ubuntu, Mint, BackTrack, Security Onion ...
Ka hitako fa misy zavatra sarotra hanjavona ...
Mikasika ny SystemD, zavatra manaraka ihany koa aho, hitako ny momba an'io satria voatonona tao amin'ny DebConf13 izy io ary niteraka tabataba teo amin'ireo mpamolavola Debian, ary koa nisy karazana tsindry na sosokevitra avy amin'ny Google sy Red Hat ho an'ny fampiharana ny SystemD, nahita horonantsary ihany koa aho ary namaky bilaogy vitsivitsy izay nanononany ireo hidin-trano namboarina taorian'ny nanovana ny lozisialy binary izay heverina fa azo antoka ... ary izany no nahalalako ny momba an'i Devuan ...
Mety hitovy amin'ny OpenOffice ve ny LibreOffice?
Avy amin'ny zavatra hitako, diso maromaro no mivadika amin'ny SystemD ary misy ny manohitra, CentOS toa an'i Debian izay malaza amin'ny mpizara dia misafidy ny SystemD ...
Hiezaka ny ho mailo amin'ny fampahalalana misimisy momba azy aho.
Valio ny @nagual_oax
Augusto Xarlatán dia hoy izy:
Ny fihenan'ny fisian'ny fizarana vaovao dia vokatry ny Ubuntu sy ny derivatives maro an'isa, tena manao tsara ny asa eo amin'ny birao izy ireo, tsara endrika izy ireo ary tsy misy te-hamita ny lohany mametraka / manangona mpamily tsy mandeha amin'ny hafa distro
Ny zavatra mampalahelo dia ny fomba nikatonan'ny Ubuntu sy ny derivatives azy, toa mifanohitra izany fa tena zava-misy. Ny fanavaozana matanjaka indrindra dia ny lohahevitra systemd sy faenza.
Valiny tamin'i Augusto Xarlatan
toñolocotelan_te dia hoy izy:
Mihena izy ireo satria ny Linux, eo amin'ny sehatry ny birao, dia tsy afaka miaraka amin'ny hafainganam-pandehan'ny Windows sy Mac, izay samy tsara kokoa hatrany.
Mamaly an'i toñolocotedelan_te
Naharikoriko ahy ny nahita ny fitafianao uu
Mbola tsy tonga ny fetin'ny adala aprily.
fa firy amin'izy ireo no tokony hantsoina hoe fizarana, fa tsy "pimp" an'ny XXX ... teboka iray manandanja, ohatra ny lalina na kaos, ezak'izy ireo ny maka zavatra sy manatsara azy, fa amin'ny fahorian'ny fanahiko, #! fanamafisana tsara fotsiny ny script openbox + tint2 + amin'ny debian rehetra io
Mihoatra ny isan'ny fizarana dia tokony hanamarina ny isan'ny fandraisana anjara amin'ny kernel, izay manao azy ireo, sy ny tahan'ny fidiran'ny linux isika, ary hiezaka ny hanala ny veran-tsika ary hijery ny maodelin'n android, satria na dia tsy gnu aza linux, ny havana sasany dia
Ny hany zavatra zarain'ny Android sy Linux dia ny kernel sy ny firafitry ny lahatahiry mitovy na latsaka, ny sisa dia ny milina virtoaly Dalvik miasa ambony nefa tsy fantatry ny mpampiasa izay ao ambany.
Na eo aza izany, ny fitaovana Android dia toa misy fameperana amin'ny fampiasana azy ireo raha tsy ampifandraisinao amin'ny kaonty Google izany ... na izay no tian'izy ireo eritreretinao, satria raha ny marina dia hitako fa afaka manao zavatra amin'izy ireo ianao ary mametraka ny zava-drehetra esory fotsiny ilay izy, hamafa ny rindranasa Google rehetra (tafiditra ao ny Play Store, afa-tsy ireo izay tena ilaina tokoa) ary apetraho avy eo Aptoide (Amin'ity fahagagana ity dia afaka mametraka ny karazana rindranasa rehetra aho, na maimaim-poana izany, na loharano misokatra na voajirika, ary tsy misoratra anarana na aiza na aiza).
Lahatsoratra mahaliana. Mampisaintsaina anao izany.
Raha tsy manontany tena na inona na inona dia manontany tena ny amin'ny fanisana ny fizarana. Azo antoka fa mbola misy distro maro hafa ary samy manana ny antony hamoronana na hanjavona ny tsirairay.
Na izany aza, tsy ekeko mihitsy ilay fehezantenin'i elav: «Manohana ny fahasamihafana sy ny fahefana hisafidy aho, fa raha izaho manokana dia 100 ny fizarana hafa mety ho faty. Amin'ny farany, misy vitsivitsy ihany izay tena mitondra fanavaozana, na ny forongony ary ireo no tokony haharitra mandrakizay. "
Amin'ny ankapobeny (ary tsy milaza mazava azy ho azy aho), heveriko fa misy hevitra "ara-barotra" loatra amin'ilay teny hoe "fizarana GNU / Linux". Mazava ho azy fa raha tsy misy fizarana matanjaka dia ho sarotra kokoa ny fampandrosoana ary tsy misy ny fanampiana rehetra ananantsika ankehitriny. Na izany aza, imbetsaka aho no namaky zavatra toy izao: "Tsy misy dikany amiko ny fahafatesan'ny fizarana X satria tsy manome zava-baovao izany." Ary eo no ahitako izany fahitana ara-barotra amin'ny fizarana izany.
Ny tsy fahitan'ny besinimaro ny X distro dia tsy antony anaovany fampandrosoana. Ny foto-kevitry ny GNU / Linux dia mandrisika indrindra fa ny olona tsirairay dia afaka mandray izay tadiaviny sy izay tsy ataony ary mamorona zavatra tsy manam-paharoa manome lanja azy. Raha izaho, ao amin'ny Debian + Mate amin'izao fotoana izao, dia te hanana iso miaraka amina installer izay manome ahy ireo programa sy fikirakirana tiako ary tiako hamoaka azy io mba hisy olona te hampiasa azy, tsy misy manakana ahy tsy hanao izany ary izany no ny haren'ity tontolo iainana ity. Angamba olona iray ihany no manararaotra an'io, fa ahoana?
Ohatra, apetrako KaOS. Io no ohatra tsara indrindra amin'ny fandraisan'ny olona zavatra iray sy fanovana azy arakaraka ny tadiaviny (izy amin'ity tranga ity), rindrambaiko sasany sy maritrano sasany ihany no tohanany.
Ny zavatra iray hafa manelingelina ahy dia ilay andianteny: "raha nisy ny ezaka niarahana natao ary nisy fizarana iray hafa nijanona tsy noforonina sns ...". Adinontsika fa ny ankamaroan'ny fizarana dia mivoaka amin'ny fotoana malalaka an'ny olona tsirairay nefa tsy mandray na inona na inona ho valiny ary ny olona tsirairay dia manao amin'ny fotoana malalaka izay tadiaviny.
Na izany na tsy izany dia tsy fantatro raha nanazava ny momba ahy aho, saingy imbetsaka aho dia mahita fa tsy dia nodinihintsika kely ny dikan'ny fitsinjarana nataon'ny olona iray ho azy ireo na ny ezaky ny olon-kafa noho ny tsy fahitana fahendrena fotsiny. amin'ny zavatra.
Fiarahabana sy fisaorana noho ny lahatsoratra!
Tom Mx dia hoy izy:
Ahoana ny momba an'i Tesla, heveriko fa ny ady hevitra mitovy dia ny fahitana ny fahalalahana mitovy hamorona doka ho adidy mitovy fahalalahana misafidy zavatra azo antoka sy milamina fa tsy "petat flares"
Distros izay tena voafaritra tsara ary tsy dia misy fanoloran-tena sy loharanon-karena mety ho mora mihalefy.
Izaho manokana dia mandeha miaraka amin'i Deb noho izay ao ambadik'io havoana io ary fantatro fa tsy hisy izany
"Fitiavana ora vitsivitsy"
Mamaly an'i Tom Mx
Ahoana no fomba fanoratako tsoratadidy an'ity lahatsoratra ity, nefa tsy mila fanamarihako azy amin'ny firefox
Pep Sanchez @PepInca dia hoy izy:
Efa antitra aho, saingy nanomboka ny zoma dia nanapa-kevitra ny hiala windows ary hanomboka amin'ny LINUX. Izaho dia 40 ary niaraka tamin'ny Spectrum 48kb, avy eo ny Amiga 500 miaraka amin'ny Latice C ary avy eo ny 386. LINUX Distros dia betsaka ny tokony ho faty, hainay ny manavaka ireo izay te hanararaotra sy eo amin'ireo izay tia computing sy mizara.
Mamaly an'i Pep Sánchez @PepInca
Lahatsoratra mahaliana @elav ary azo antoka fa tetikasa maro no maty na lasa matoatoa fotsiny, saingy mbola eo ireo lehibe, ary heveriko fa izany no zava-dehibe rahateo, satria ireo disto ireo no mamaritra ny alehany GNU / Linux ho tontolo iainana matotra amin'ny sehatra rehetra.
PS: Any Debian sy ny systemd halan'ny olona izao, satria maty ny kapila misy ahy miaraka amin'i Funtoo, miandry an'i Devuan hamoaka repos matotra hanao transplantna 😀
Azoko lazaina aminao farafaharatsiny tranga iray izay fantatro. Fuduntu, andro lasa izay aho niresaka tamin'ny mpamorona momba ny fanjavonan'ny distro, tao #devuan ary nilaza tamiko izy fa ny tena antony dia ny fisehoan'ny systemd. Notazomin'izy ireo ny fizarana mifanitsy na remix an'i Fedora izay tsy nanana systemd tanteraka ary tsy te hampihatra izany satria heverin'izy ireo ho 'vazivazy ratsy', teny misy ny voambolana. Nilaza tamiko izy fa raha ny tena izy dia asa be ny mijanona amin'ny lalina tsy miato mandritra ny herintaona miaraka amin'ny systemd efa misy. Ireo mpamorona dia tsy afaka nanadio fonosana, nanasaraka azy ireo ary namerina azy ireo tsy misy fiankinan-doha amin'ny systemd amin'ny fotoana sy habetsahana. Nanapa-kevitra ny hampitsahatra ny tetik'asa izy ireo mandra-pisian'ny mpamorona maro kokoa, satria be ny asa ho an'ny olona vitsivitsy ary tsy afaka mijanona ao anatin'io asa faran'izay mafy io izy mandritra ny herintaona mahery, manala ny rpm amin'ny systemd, izay betsaka. Ka alohan'ny hanaterana zavatra tsy dia misy kalitao na miaraka amin'ny systemd dia naleony nijanona ny distro
Satria mpinamana toy izany ianao sy ilay namorona an'io distro io, tsy noteneninao ve izy hanandrana tsy misy ilana azyd?, farafaharatsiny mba hitahirizanao ireo fonosana mitaky systemd rehefa mahita vahaolana tsara kokoa ianao.
Fantatrao ve ny metamorphose distro chamada Breziliana? Ilaina ny manome iray omena.
Español: Ary inona no mampiavaka an'i Metamorphose izay tsy ananan'izy ireo intsony ny fizarana an-jatony na an'arivony mihantona amin'ny Internet (farafaharatsiny ireo izay havaozina hatrany)?
Portugues do Google Translator: Inona no manokana momba ny Metamorphose izay manana fizarana an-jatony na an'arivony maro izay an-tserasera izao (tsy dia hitazona azy ireo miaraka amin'ny angona)?
Darkmind dia hoy izy:
Aleo ... manana distro be dia be
Mamaly an'i DarkMind
Heveriko fa mitranga ny fahasamihafana noho ny fahasarotana. Isaky ny sarotra kokoa ny fizarana dia misy ny fiovana avy amin'ny kernel 2.6 ka hatramin'ny 3.0, ny fiovana avy amin'ny init mankany amin'ny systemd, ny fiovana amin'ny X, ary ny fahasarotana amin'ny fampiasana.
Hitako fa ny fizarana tanjona ankapobeny (Ubuntu, Debian, Fedora, OpenSUSE, Arch) dia mitombo hatrany ny fampiasana azy, ary ireo mihena manokana sy manokana kokoa.
Tsena iray hitako fa maty miadana dia fizarana loharano ambany, toy ny DSL, Puppy na VectorLinux, nanomboka ny 5 taona lasa izay milina miadana dia PIII, ankehitriny ny masinina miadana dia heverina ho Dual Core E2160 sy ondrilahy 2 GB, ary ny ny fizarana malaza indrindra dia miasa ao amin'izy ireo tanteraka, mieritreritra aho fa amin'izao fotoana izao mihoatra ny hijerena dia tsy misy olona mampiasa Pentium III misy 192 RAM sy kapila 20GB ho toeram-piasana.
Valiny tamin'i Gonzalo Martínez
Mazava ho azy, valiny tena mahomby izany, Intel ohatra dia nisy fanovana maritrano isaky ny 14-15 volana amin'ny resaka solosaina birao, izay ohatra ny i5 2500k (toa ahy) dia efa «antitra» maritrano, na dia izany aza tena lavitra ny zava-misy, na eo amin'ny lafiny fampisehoana na amin'ny haitao, indrisy fa ny tsena dia manasazy ny vidin'ireny vokatra ireny na dia eo aza ny fampisehoana azy ireo ankehitriny.
Mikasika ny fomba fijery hafa, mazava ho azy, amin'izao fotoana izao, ny fahazoana mizara dia manontany, ary tsy mila mandoro CD na DVD hitsapana akory aza isika, pendrive 2GB amin'ny ankapobeny dia ampy ary izay ihany. Ho fanampin'izay, fantatro ny maro izay nanandrana ny Linux mba hialana fotsiny ilay fantsika amin'ny fahitana azy ary mijanona ihany izy ireo, mazava ho azy, mbola vaovao izy ireo, saingy mieritreritra aho fa amin'ny rafitra rehetra (Linux, Windows, Mac, Android , sns.) izy ireo no lehibe indrindra amin'ny ankamaroan'izy ireo, izay ny fampiasana azy io dia ny fandaniana ny Internet, ny haino aman-jery multimedia ary ny birao, ny olona toa antsika dia mino fa isika no kely indrindra ary ao amintsika no manana io karazana "fanao" havanana io fianjerana, ho an'ny filàna manokana sy manokana.
David Myths dia hoy izy:
Hanombohana azy, heveriko fa ny fahasamihafana atolotry ny tontolon'ny GNU / Linux anao momba ny isan'ny fizarana azo isafidianana. Saingy etsy ankilany, heveriko fa be loatra ny distro izay tsy mitovy amin'ny karazany hafa (amin'ity tranga ity dia miorina amin'ny Ubuntu, izay mifototra amin'ny Debian). Heveriko ihany fa tokony hisy ireo izay manome zavatra hafa, manavao, manoloana ny hafa na mety amin'ny vondron'ireo mpampiasa. Misy ny distros izay manome vahaolana vaovao toa an'i NixOS, Maui Linux, Porteus sy ny hafa izay tsy fantatsika ary manana mpandraharaha farafahakeliny manohana azy ireo, fa ny hafa kosa dia nalaina avy tamin'ny Ubuntu ary mety ho 'mihoatra ny mitovy 'manana vondrom-piarahamonina maro kokoa. Izany no antony eritreretiko fa raha te handroso mankany amin'ny fandresena ny birao ianao dia maro ny distros 'izay mbola hitovy' amin'ny hafa, no tokony hanjavona ary ny mpamorona azy ireo dia mitady vahaolana vaovao manosika ny tontolon'ny GNU / Linux hahatratra tanjona vaovao. fa izy ireo dia misolo tena ny fanamby ho an'ny penguin OS.
Avy eo, any an-tany hafa, dia hisy ny faravodilanitra teknolojia samihafa toy ny fivoaran'ny memsistors, izay anondroana ny fisehoan'ny OS loharano misokatra hafa raha toa ka tsy maharesy ny sisin-teknolojia anehoan'ity fanavaozana ity ny Linux.
Valiny tamin'i David Mitos
Eny, zazavavikely aho ary tena feno fankasitrahana ny gnu / Linux satria manana karazana distros be dia be izy. Eny, antenaina fa tsy hihena ireo fa hitombo…. Tiako ny rindrambaiko maimaimpoana
Mamaly an'i Osscar
Izaho dia iray amin'ireo nilaza fa ny fanampiana dia tsy manampy zava-baovao ary mila manampy ireo fototra iorenan'ny hafa isika.
Miaraka amin'ny derivations marobe dia tonga ny fanaparitahana sy ny tetik'asa izay hita ankehitriny ary tsy hisy intsony ny rahampitso.